Umkhumbi "Alexey UTolstoy": ukubuyekezwa, apholile isithombe
Umkhumbi "Alexey UTolstoy" kubhekwa omunye the best imithambo enjalo emfuleni iVolga.
Umkhumbi "Alexey UTolstoy" Yakhiwa eJalimane ngekhulu leminyaka lamashumi amabili. Emashumini eminyaka kamuva, ngo-2006, kube lalungiswa ngokuphelele futhi olwesimanje ngale ukuqashelwa. Namuhla, "u-Alexei UTolstoy" - umkhumbi (isithombe okwethulwa kulesi sihloko), esinikela ngokugcwele izivakashi induduzo esiphezulu kanye nokuphepha. Kwaphela isikhathi eside okuthunyelwe bombusi bomkhumbi kuthatha uVitaliy Aleksandrovich Ponomarev.
Umkhumbi "Alexey UTolstoy": apholile
Izivakashi zitholakala emkhunjini e apholile lwezigaba ezahlukene:
Zonke kumakhabheni, kungakhathaliseki ukuthi isigaba, abe yokugezela elehlukile, yena, kufaka yangasese, usinki eshaweni. Ngaphezu kwalokho, igumbi ngalinye unesiqandisi encane, air conditioning, ifenisha ukhululekile futhi inombolo yocingo lapho ungakwazi ukuxhumana abasebenzi noma izimenywa ngaphandle komkhumbi.
Lesi sigaba sichaza ezichumayo apholile.
Cabin "Suite Double +" - itholakala kwi emphemeni engenhla. It has imibhede esengeziwe ezimbili. Esikhathini gumbi, ngaphezu zangasese ejwayelekile nge ukugeza nomcengezi eshaweni, esiqandisini encane, air conditioning, TV, ucingo okuxhumana yangaphakathi nabasebenzi noma izimenywa elingaphansi emkhunjini dryer kuyinto izitsha, embhedeni owodwa kabili bese 2 seater usofa embhedeni. Kukhona ukufinyelela ekhethekile emphemeni kanye nehholo ehlukile 2 kumakhabheni nge nempahla esithambile.
Cabin "Suite Double" - isivele emphemeni isikebhe. Kanye "Suite Double +" has imibhede emibili eyengeziwe, umbhede double nombhede ekhoneni usofa.
Cabin "1A olulodwa" - nayo itholakala kwi emphemeni isikebhe. Lena eyodwa elilodwa elalingaphandle gumbi. Kukhona omunye embhedeni owodwa futhi embhedeni munye usofa bese lezingubo.
Cabin "2A double +" - nayo itholakala kwi emphemeni isikebhe. It has igumbi elilodwa kuphela, eyenzelwe izihlalo 2. Kukhona eyodwa kabili embhedeni noma usofa embhedeni. Cabins isici yalolu hlobo - ngokuthi imibhede ahlelwe parallel odongeni.
Cabin "2A double" - itholakala kwi emphemeni isikebhe. It has imibhede emibili olulodwa noma embhedeni owodwa kabili futhi umbhede usofa. I engavamile walesi Cabin: imibhede ahlelwe perpendicular nomunye.
Cabin "kabili nge Embhedeni owenezelwe Junior +" - itholakala kwi emphemeni phakathi. Cabin nomunye embhedeni owodwa futhi embhedeni munye usofa.
Cabin "kabili imibhede esengeziwe ezimbili junior +" - nayo itholakala kwi emphemeni phakathi. I gumbi yalolu hlobo ihluke kanjani sangaphambilini khona imibhede emibili eyengeziwe esikhundleni esisodwa.
Cabin "2B double +" - itholakala kwi emphemeni phakathi. Lena gumbi studio, lapho emibhedeni olulodwa ezimbili zitholakala. kumakhabheni isici "2B double +": embhedeni ahlelwe parallel odongeni.
Cabin "2B double" - nayo itholakala kwi emphemeni phakathi. The main umehluko studio kumakhabheni yalolu hlobo gumbi "2B double +" indlela khona imibhede olulodwa ezimbili. I engavamile walesi gumbi - ngokuthi imibhede ahlelwe parallel odongeni.
"U-Alexei UTolstoy" - umkhumbi, alinikela ukuchitha isikhathi imigoqo ehlukahlukene zokudlela elise kwesokudla ebhodini. Lapha usebenza yokudlela at izihlalo esisodwa neshumi nanhlanu, ikamelo umculo izinhlobo ezahlukene Amabha: kungcono nesigaxa sushi nesigaxa disco, futhi ema endaweni ebizwa ngokuthi "The epholile Bar". Ngaphezu kwalokho, ebhodini kukhona igumbi izingane, uju. ngisho iphuzu futhi (ukunakwa!) ukugcina ukukhokhela amasevisi mobile.
Ukudla ebhodini "Alekseya Tolstogo" kwenziwa uhlelo olukhethekile, owawuthi isivakashi ngasinye oyi-ukukhethela isidlo bathandile iningi kwethulwa. Izivakashi ukudla noma ngubani abe yokudla ekhethekile, ungakhathazeki: labapheki umkhumbi ukulungiselela izitsha nangaphansi oda siqu. Uma cruise ihlala amalanga angaphezulu kwamahlanu, abapheki ukuhlela izinsuku ezikhethekile for izivakashi, ngokuthi "Izinsuku cuisine kazwelonke". Kulabo Ngivuka ekuseni kakhulu, ngaphambi kokudla kwasekuseni, iziphuzo ezishisayo: itiye noma ikhofi.
Ezokuzijabulisa ebhodini "Alekseya Tolstogo" wacabanga ngisho nemininingwane emincane, ukuze kokubili ngabantwana nangabantu abadala akudingeki isikhathi ngizithola phakathi cruise. On the isikebhe kukhona disco ehlelekile ahlukahlukene, amakhonsathi nge ekhethekile guest izinkanyezi, workshops izingane kanye nabantu abadala, nokunye okuningi.
Ikakhulukazi izingane sokuqondisa umkhumbi eceleni waqasha izingane nokuveza, abangagcini nje ukukitaza abantwana kodwa futhi iqinisekisa nokuphepha kwabo ngesikhathi abazali bazo uphumule. Esikebheni kwakuneqembu usebenza club ngokuthi Teen club yezingane.
Cruises phezu iVolga kusuka emadolobheni ehlukene
Cruises emkhunjini "Alexey UTolstoy" tour opharetha anikele 'Amagugu eVolga esifundeni "futhi" Russia wami ". Kukhona Cruises ahlukahlukene nge ukufinyelela kusuka emadolobheni ahlukene of Russia:
Ngo-2015 umkhumbi navigation ezifana amadolobha Russian njengoba Yaroslavl futhi Astrakhan kwanezelwa.
Okusanda kwaba cruise ekhethekile, okuyinto sanikezelwa ukugubha iminyaka engu-lamashumi ayisikhombisa Ukunqoba e ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe.
Ukuze ukubhuka cruise emkhunjini "Alexey UTolstoy", udinga noma siye endaweni eseduze ejenti ehhovisi travel edolobheni lakho, noma ukubeka phansi yokubhuka inthanethi kwi-website esemthethweni ye-opharetha tour. Inkokhelo eyenziwa ngokheshi in the yehhovisi, noma nge-Internet.
Umkhumbi "Alexey UTolstoy": Izibuyekezo
Izivakashi emkhunjini "Alexey UTolstoy" kusho izakhamuzi ngazwi linye wathi: "Konke kwakuyize nje omkhulu!". Izivakashi badumise inkonzo high quality, kahle inhlangano ezicatshangwe imisebenzi yamasiko, kanye uhlelo ugesi sikhethe izitsha ukuze ivumelane yonke akuthandayo. Abantu abakhetha ukudla "Halal", wabhala ukuthi labo kukhona yokudla ekhethekile, ungakhathazeki ngakho: ukupheka kahle ukuba izidingo Igumbi ngamunye ngamunye. Ngokuvamile, izivakashi, izivakashi emkhunjini "Alexey Tolstoy," kusho indlela obhekene umsebenzi ngamunye umkhumbi umsebenzi wakhe: oweta kukhona bartenders esinenhlonipho smiling, Chef ebucayi (okuyinhloko wangempela izikebhe zabo), d Maitre 'ukaputeni ezinhle wazibonela Animators ayahlekisa kodwa hhayi awayiphazamisi . Ikakhulukazi kanzima for amaholide lakhumbula Animators labetibambile ebhodini iholidi ngokuthi "Usuku Neptune." Kubonakala sengathi zonke kukhona ngempela ngengozi!
"Kozma Minin" - umkhumbi ngomlando
Isiteshi Saimensky. Lake Saimaa. Vyborg Bay. emfuleni cruises
Umkhumbi "Russia Elikhulu" Liyini - kukho olukhulu emaholide akho
Kanjani ukuhlela cruise abajabulisayo eScandinavia
10 we zikanokusho kunazo kufika imikhumbi emhlabeni
Cruise Port of Hamburg: incazelo. cruise ezokuvakasha
Yemifino Unique - iklabishi savoy. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka, amathiphu ukupheka
Umhlangano yenhlangano umzali ebangeni 7th. Indlela ubambela umhlangano endaweni ebangeni 7th
I-Blue tooth - eyeqisayo nhlobo
Keykpopsy: igxathu negxathu zokupheka ngezithombe
Indlela yokwenza iwayini kusuka apple juice ekhaya?
Inkukhu gizzards, athoswe anyanisi: ukuhlukahluka eziningana izitsha
Lezi 4 umculi ukupenda abantu, kubenze ezingabonakali
Ngingathola abakhulelwe bezoziphatha lapho okuphazanisayo?
Ufuna umdanso yesimanje? On pylons! Dance phezu pylon (umdanso isigxobo): ukuqeqeshwa, umculo, ukudansa izingubo kanye nokubuyekeza
Indlela yokwenza eshaweni e lokugeza izandla zakho siqu?